ဂယ်ရီ Wilson သည် Porn ၏ထိခိုက်နိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (Slickster) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်အကြောင်းပြောဆိုသည်
ဂယ်ရီ Wilson က သူ့စာအုပ်နှင့်အတူမေးခွန်းကြီးပြင်း Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် အင်တာနက်ခေတ်တွင်ညစ်ညမ်း၏ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ။ ဒီသုတေသနအပျေါမှာလဲသူကသူ့စာအုပ်အပေါငျးတို့သအမြတ်အစွန်းလှူဒါန်းတဲ့သူတစ်ဦးကဟောင်းကဇီဝြဖစ်စဉ်ဆရာမ YBOP ပရဟိတရန်။ Utah ဥပဒေပြုလွှတ်တော်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဆေးရွက်ကြီးစက်မှုလုပ်ငန်းအလားတူပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစက်မှုလုပ်ငန်းတရားစွဲဆိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုဥပဒေပြဌာန်းရှောက်သွားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့။ အဆိုပါသက်သေအထောက်အထားများ porn အချို့အလွန်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘာ porn စွဲသုတေသနရန်သင့်အားမှုတ်သွင်း?
ဒါကထူးဆန်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခု (ပြုံးရယ်) ။ ငါခန္ဓာဗေဒ, ဇီဝကမ္မဗေဒ, ရောဂါဗေဒဆရာဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ငါ့အမျိုးကိုငါ့ဇနီးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်အကြောင်းကိုအကြောင်းကိုတဆယ်ခြောက်နှစ်အကြာအကြောင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ သူမမှာဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်နှောင်ကြိုးနှင့်လိင်၏အာရုံကြောဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒအကြောင်းထပ်မံလေ့လာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာသူမ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်လိင်၊ သုတ်ရည်လွှတ်မှု၊ orgasam၊ dopamine စွဲလမ်းမှုစသည့်သော့ချက်စာလုံးများပါသောဆောင်းပါးများစွာကိုတင်ခဲ့သည်။ ဒီတော့ ၂၀၀၆ လောက်မှာဒီလူတွေကသူမဖိုရမ်မှာပေါ်လာတယ်။ ဒီဖိုရမ်ကညစ်ညမ်းမှု၊ စွဲလမ်းမှုတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ ကျွန်တော့်ဇနီးက“ မင်းဒီမှာဘာလုပ်နေလဲ” လိုဖြစ်နေတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ခုခုရှိနိုင်တယ်။ ” နှစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာညစ်ညမ်းတဲ့ပြန်လည်နာလန်ထူလာတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ Tedx Talk ကိုသီးခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဘာမှမပတ်သက်လိုသောအရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သိပ္ပံပညာနှင့်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှု၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်လူများကြုံတွေ့နေရသောကြီးမားသောကွာဟမှုဖြစ်သည်။ လူများစွာသည်ဒုက္ခရောက်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့အားသတင်းအချက်အလက်ပေးချင်ခဲ့သည်။
ငါက၎င်း၏တော်တော်ကျယ်ပြန့်စဉ်းစားပါ။ သင့်ရဲ့အဖေ Playboy မှာရှာဖွေနေငါအတော်လေးအနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်အစစ်အမှန်ကလူကိုမှန်ကန်လိင်ရှိသည်နှင့်ဗီဒီယိုကဗီဒီယိုကလစ်နှိပ်ပါနိုင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်၎င်း၏အားလုံးအမာခံယခုနှစ်ပေါင်းအဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားကြိုတင်အဘို့သင့်ကိုပထမဆုံးနမ်းသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံဖို့စောင့်ကြည့်လူ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခဲ့ဘူးရာ သမိုင်းဒါအဝတ်အချည်းစည်းဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်တွေနဲ့ဆက်ဆံမခံခဲ့ရပါ။ သင်သက်ရောက်မှုကိုစဉ်းစားပါလျှင်သင်တို့ရှိသမျှသည်ထိုကဲ့သို့သောလိင်အရအခွင့်အရေးသဘောထားတွေအဖြစ်ဆက်စပ်မှု, ကျူးကျော်ဆင်းရဲသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး, ဆင်းရဲသားကိုစိတ်ကျန်းမာရေး, ဆင်းရဲသောဆက်ဆံရေးညံ့ဖျင်းခြင်းဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု, နှင့်ကျောင်းအတွက်ပင်ဆင်းရဲသောသူသည်စွမ်းဆောင်ရည်ထွက်စာရင်းပြုစုနိုင်ပါတယ်။ ငါစောင့်ကြည့်သောပစ္စည်းပစ္စယယောက်ျားနှင့်၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်သက်ရောက်မှုအပေါ်အများစုဖြစ်ပါတယ်။
ရုံသငျသညျကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားမဆိုစွဲကြိုက်တယ်။ သငျသညျဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေတွေ့မြင်သို့မဟုတ်သင်သူတို့၏အမျိုးအမတရားသောနှစ်ဦးစလုံးရှိခြင်း start အကယ်. သင်တစ်ဦးစွဲရှိဆိုင်းဘုတ်များဖြစ်ကြသည်။ သတင်းစာ၌သငျလောင်းကစားဝိုင်းသို့မဟုတ်ကျော်သို့မဟုတ်အင်တာနက်စွဲတူသောဖြတ်အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေတွေ့မြင်ပေမယ့်ရှိပါတယ်မရကြဘူး။ ကျနော်တို့ porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားသူကိုအမျိုးသားများတွင်ပြင်းထန်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေကက်တလောက်ပါပြီ။ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေတစ်ခုမှာယောက်ျားလိင်စိတ်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ပြီးပြည့်စုံသောဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားရသည်, အအေးသို့မဟုတ်ထုံခံစားရနိုင်ပါတယ်အဲဒီမှာ penis ။ ဤရွေ့ကား, အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်တဲ့ယောက်ျားအတွက်, နှစ်ပေါင်းအပေါ်သွားနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျ porn စွဲကြုံနေရယောက်ျားအကြောင်းကိုပြောပြီပါတယ်။ အမြိုးသမီးမြား porn စွဲဖြစ်လာနိုင်သလား?
ကျနော်တို့ကျိန်းသေအမျိုးသမီးများကိုသူတို့ porn စွဲနေကြသည်ဟုပြောကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့ womwomen သူတို့ကလုနီးပါးတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာ porn ကိုအသုံးပြုဖို့အမြိုးသမီးမြားပေမယ့်လူပျိုတို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကြောင့်သူတို့သာအမာခံမုဒိမ်းမှု porn မှပယ်ရနိုင်တွေ့မြင်ကြည့်ရှု, အမျိုးသမီးများက၎င်း၏အဲဒီမှာလိင်တက် messed လို့ပြောကြည့်ပါ။ ထိုနည်းတူယောက်ျားဘို့ကစာရင်းအင်းနံပါတ်များပိုမိုမြင့်မားပါလိမ့်မည်ဒါပေမယ့်မိန်းမတို့အဘို့ porn စွဲမြင့်တက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဂယ်ရီ Wilson ကအဘို့ကိုနောက်ကဘာလဲ?
ကြိုတင်၏ဖန်တီးမှုငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း YBOP ခန္ဓာဗေဒ, ဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်ရောဂါဗေဒဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့ပါသည်။ အနှစ်သာရ၌ငါအငြိမ်းစားနှင့်လက်ရှိနဲ့ဆက်စပ်အချိန်အရာအားလုံးမြှုပ်နှံထားငါ YBOP နှင့်ဤဘာသာရပ်။ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါသည်မသိရပါဘူးဒီဘာသာရပ်လေ့လာစူးစမ်းဖို့ဆက်လက်။
by ရိုင်ယန်ဂလိုဗာ - ဇန်နဝါရီလ 26, 2017